>Dr. Saw Wah Htoo passes away | MoeMaKa Burmese News & Media
ကဲ .. ဘာလုပ်မှာလဲ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး - နေမျိုးဇင်ကို ဂုဏ်ပြုပါ၏
>Rangoon's early Oct images
ရွှေမန်းကိုကိုအမှုမှ ခေါင်းဆောင်ဟုယူဆရသူ လွတ်မြောက်နေဆဲ - fake Shwe Mann Ko Ko?
>Dr. Saw Wah Htoo passes away
မော်လမြိုင် ဒေါက်တာစောဝါးထူး ကွယ်လွန်
အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁ နာရေးကြော်ငြာဖြတ်စ
မော်လမြိုင်မြို့ အနာကြီးရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆေးရုံတွင် တာဝန်ယူခဲ့သော ဒေါက်တာစောဝါးထူးသည် အင်္ဂါနေ့က ကွယ်လွန်သွားသည်။
ဆရာကြီး ကွယ်လွန်ကြောင်း နာရေးကြော်ငြာကို ယနေ့ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါက်တာစောဝါးထူး၏ အမည်သည် ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သားတို့၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်
ပထမအဆင့် ဆန်ကာတင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။